Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadaha S.Ogadenya ee Yemen iyo Sacuudiga oo si kulul u cambaareeyay falkii gumaysiga uu ku afduubay madaxda JWXO
Jaaliyadaha S.Ogadenya ee Yemen iyo Sacuudiga oo si kulul u cambaareeyay falkii gumaysiga uu ku afduubay madaxda JWXO
Jaaliyada Somalida Ogadenya ee kudhaqan wadanka yaman waxay sikulul ucabaaraynaysaa dhacdadii foosha xumayd eey nidaamka dhiigyacabka ah ee Itoobiya kula kacday masuuliyiin katirsan Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) kuwaasoo kala ahaa Naftiihure Sulub Abdi Ahmed & Naftiihure Ali Ahmed Hussein (Ali Dheere) oo laga afduubay magaalada Nairobi ee Caasimada dalka Kenya maalinimadii axada ahayd ooy taariikhdu ku beegnayd 26/01/2014 ayagoo Nairobi ujoogay wadahadal laqorshaynayay inuu dhexmaro Jabhada ONLF & Gumaysiga saama laluudka ah ee Itoobiya.
Waxaan Cambaaraynaynaa gumaadka, gumaysiga & cadaalad darrida uu nidaamka Itoobiya kuhayo guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan shacabka Somalida Ogadenya oo maalin kasta kujidh dil, kufsi, dhac & barakicin si loo ogolaysiiyo qarnigan aan kujirro gumaysi iyo dullinimo sharci darro ah. Waxaan Cambaaraynayaa kuwa dulmiga oogu garbaynaya maxaysatada kunaaxday dhiiga shacabka Somalida Ogadenya & kuwa ujaajuusa ee garabka kusiiya dhibaataynta iyo hagardaamada bulshada rayadka ah ee Somalida Ogadenya.
Waxaan sikulul u canbaaraynayaa fal danbiyeedkan foosha xun kaasoon ahayn markii koobaad ay Itoobiya samayso ayadoo marar hore wadanka Soomaaliya kasoo afduubtay halgamayaal udhashay wadanka Somalida Ogadenya ooy jeelasha kubah dishay kadib markii lagu sameeyay ciqaab tii oogu xumayd abid taasoo keentay ineey muwaadiintaas dulmiga lagu sameeyay in loola dhaqmay si,aan anshaxa iyo dhaqanka suuban ee islaamnimada iyo xuqooda bila aadan loola dhaqmo.
Jaaliyadda Somalida Ogadenya ee wadanka yaman waxay Somalida Ogadenya ee geesiga ah oogu baaqaysaa ineey xoojiyaan midnimadooda ooysan udhago nuglaanin qorshayaasha fulaynimada iyo bahalnimada ah eey Itoobiya kudoonayso ineey Halganka xaqa ah ee Ogadenyana ay kuqabjabiso, waxaana leenahay shacabka Ogadenya meel kastoo uu joogaba waa inuu noqdo ul & diirkeed cadowgoodana ay meel ooga soo wada jeedsadaan.
Jaaliyadda Somalida Ogadeniya ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa iyaguna shir isugu yimid ay ku cambaareynayaan falkii fuleynimda ahaa ee sirdoonka taliska wakhtigiisii dhamaaday ee Itoobiya kaga afduubeen Sulub Axmed iyo Ali Xuseen dalka Kenya todobaadkan aan ku jiro horaantiisii.
Jaaliyadda ayaa waxay si dhab u rumaysan tahay in ficilkan Itoobiya ku afduubtay nimankan madaxda ah uu sii dardar galin doono halganka xorimo doon ee ka socda Ogadeniya. Jahliyadu waxay balan qaadaysaa inay sii xoojin doonto kaalinta ay halganka kaga jirto, kana qayb qaadan doonto talaabo kasta oo ku aadan madaxdan la afduubay.
Halgan ka xaqa ah wuu guuleysan